ဆိုက်ဘာတိုက်ခိုက်မှုသည်ဘော်စတွန်ကောလိပ်တွင်ရှိသည် - နှုန်းထားများ
ကျွန်တော့်အစ်မဖြစ်သူကက်သရင်းနဲ့ကျွန်တော်ဟာ Yik Yak အက်ပလီကေးရှင်းကနေတမင်တကာအမည်မသိတဲ့တွစ်တာကိုမဆုတ်မနစ်နှောင့်ယှက်မှုခံနေရတယ်။
ကျွန်ုပ်တို့ခံနိုင်ရည်ရှိသောဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်း၏ကြီးမားသောသဘောသဘာဝကိုသရုပ်ဖော်ရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းမှာကျောင်းသားများစွာခံနိုင်ရည်ရှိသောဤဆောင်းပါးသည်ကျွန်ုပ်ကြုံတွေ့နေရသောအခက်အခဲများနှင့် ပတ်သက်၍ ဤစာတမ်းကိုဖော်ပြရန်ဖြစ်သည်။
ယခုတွင် Yik Yak ဖန်သားပြင်များကိုကိုင်တွယ်ရာတွင်ဤအခြေအနေတွင် Yik Yakkers အမျိုးအစားငါးမျိုးရှိသည်။ Douchebags (များစွာသော)၊ The Confused (အခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်လိုအပ်နေ)၊ Capricious (သင်ချီးမွမ်းနေခြင်းဖြစ်သည်) ငါ့ကိုသို့မဟုတ်စော်ကားမှု?), The Egregiously Unoriginal နှင့် The Defenders (သတ္တိနှင့်အနည်းငယ်) ။
ပထမ ဦး စွာကျွန်ုပ်တို့သည် Douchebags မှစတင်သည်။ ဤသည်ကိုဖတ်ရန်ခဏကြာရသောကြောင့်ထိုင်ခုံကိုယူပါ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက် porno အတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုဖမ်း။ အဲဒါကို 'Go F *** ကိုယ်တိုင်' လို့ခေါ်တယ်။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံး porn ဒီနွေရာသီထွက်လာမယ့်ယောက်ျားတွေစိတ်မပူပါနဲ့! စောင့်ကြည့်ပါ၊ တကယ်တော့ဒါက porn မဟုတ်ဘူး ... Indie ရုပ်ရှင်ပါ။ သင်ပြီးပြည့်စုံတဲ့အချိန်ကိုကြည့်ရတာကြိုဆိုပါတယ်
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒါကမနှစ်ကဖြစ်ခဲ့တာလို့ထောက်ပြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်ဒီအက်ပလီကေးရှင်းကိုဖျက်ပစ်ဖို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုတစ်ရက် download ပြုလုပ်ပြီးကျွန်ုပ်တို့အကြောင်းကိုရာနှင့်ချီသော Yik Yaks ကိုတွေ့ရန်အောက်သို့ဆွဲချရန်မလိုခဲ့ပါ
ငါတို့ဒီအာရုံကိုလိုချင်တာကိုသူဘယ်လိုတွေ့ခဲ့လဲ။ လူမှုရေးအရထူထပ်သောစသည်တို့ကို oompa loompa နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်အရုပ်ဆိုးသောမျက်နှာ၊
Urban အဘိဓါန်က 'slooter' ကိုအောက်ပါအတိုင်းသတ်မှတ်ပါတယ် - 'Slooter ဆိုတာ slut ရဲ့အစွန်းဆုံးပုံစံပဲ။ Slooters များကိုကမ္ဘာအနှံ့ရှိကလပ်များသို့မဟုတ်သင့်ဒေသဆိုင်ရာကမ်းခြေများတွင်ပင်တွေ့နိုင်သည်။ မင်းရဲ့ဘောင်းဘီထဲကိုရောက်ဖို့ Slooters တွေကအရာအားလုံးကိုလုပ်ပေးလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ slooters သတိပြုပါ! '
ငါတကယ်ဒုတိယမှတ်ချက်မရေးခဲ့ပါဘူး - ဒါပေမယ့်သူကအကြီးတန်းမှ / s!
ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးတစ်ခုမှာ Oompa Loompa နှင့် $ 10 ပြည့်တန်ဆာပလာတစ်ခုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်း။ တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်သော။
ငါသူမသားရေလုပ်သမားဖြစ်နိုင်သည်ဆိုရပေမည်။ ငါတို့ရဲ့သုံးလိုင်းကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ၁၉၇၁ ခုနှစ်ခန့်တွင်ချောကလက်စက်ရုံ၌သူမ၏ရှုံးနိမ့်သွားချိန် မှစ၍ သူမအားရှာဖွေနေသည်။
အပိုင်းသုံးပိုင်းအမည်မသိ Yik Yak? ဒါကအပျနှံပါပဲ
အနိုင်ကျင့်ခြင်းတရားမဝင်ဘူးလား။ အဲဒီမှတ်ချက်ကကျွန်တော့်ကိုတုန့်ပြန်ဖို့ခိုင်လုံတဲ့အသိပညာမရှိဘူး။ မှတ်ချက်များသည်အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည် -
အလို။ သငျသညျဒါအသိပေးပါတယ်! အကယ်၍ မိန်းကလေးများက၎င်းကိုတကယ်နှိပ်စက်ခံရမှသာထောင်ကျနိုင်သည်။
ကောင်းပြီ၊ ယခုကျွန်ုပ်ထင်သည်မှာဤအနိုင်ကျင့်မှုကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဆေးရုံသို့သွားရသည်ဟုသင့်အားအကြောင်းကြားရန်အချိန်ကောင်းဖြစ်သည်။ ဒါကမင်းအတွက်လုံလောက်ပြီလို့လား။
အခုဒါက The Douchebags ရဲ့ကောင်းတဲ့ကိုယ်စားပြုမှုပါ။ ဒါဟာသင့်ကိုထိတ်လန့်စေနိုင်တယ်၊ Yik Yaks ၏ပထမဆုံးလှိုင်းလုံးပြီးနောက်, ငါမှတ်ချက်တွေကိုတုံ့ပြန်တုံ့ပြန်သရော်စာ Facebook ကရေးသားခဲ့သည်။ ထို့နောက်ရဲရင့်စွာအမည်မသိစာရေးဆရာများက Yik Yak ကိုသူတို့နှင့် ပတ်သက်၍ သူတို့၏ခံစားချက်ကိုသိစေရန်ထပ်မံခေါ်ယူခဲ့သည်။
ရဲရင့်စွာအမည်မဖော်သော Yik Yakkers ကိုညွှန်ကြားထားခြင်းကြောင့်ကျွန်ုပ်၏စာကိုသင်ဖတ်ရှုရတာဝမ်းသာပါတယ်
ကျွန်ုပ်၏ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်စာပို့ပြီးလျှင် Yik Yaks သည် ဆက်၍ သွန်းလောင်းခဲ့သည်။ ထို့ကြောင့် Yik Yak မှတစ်ဆင့်ဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်မှုကိုဆက်လက်ကျူးလွန်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ Buzzfeed ဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်ရေးရန်ကျွန်ုပ်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်။
ကောင်းပြီ, Yik Yak အပေါ်ငါ့ကြီးမားတဲ့နောက်ဆက်တွဲအဲဒီမှာအကြောင်းကိုပြောစရာအချို့ရှိခဲ့ပါတယ်:
သငျသညျအကြှနျုပျကိုအာရုံစူးစိုက်မှုကိုချင်တယ်မဟုတ်တော့လျှင်အဘယ်ကြောင့် Yik Yaking အကြောင်းကိုငါ့ကိုရပ်တန့်မထားသနည်း ပြနာဖြေရှင်းပြီး
ပြီးရင်ရှုပ်ထွေးသွားတယ်။ ဤရွေ့ကားလမ်းလွဲခွေးပေါက်စရုံလူမှုရေး Yik Yak ရေကြောင်းသွားလာရန်ကြိုးစားနေစဉ်အနည်းငယ်လမ်းညွှန်မှုရှာဖွေနေခဲ့ကြသည်။
ငါသည်လည်းဤ '' မျိုအမွှာ shit '' နှင့်အတူဘာတွေရှိတယ်ဆိုတာမသိရပါဘူးဒါကြောင့်သင်နှင့်ငါနှစ် ဦး စလုံးသား။ သငျသညျတကယ့် Homie ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါပေမယ့်အဝါရောင် Boot တက်မှကြွေးကြော်ကြသည်
ငါဆိုလိုတာကဘီစီပါ ၀ င်ပတ်သက်ဖို့အားပေးခဲ့တယ်၊
ကျွန်ုပ်တို့၏စာအုပ်များဇောက်ထိုးခဲ့ကြသည်? သငျသညျအကြှနျုပျ၏စိတျအပိုငျးအပေါ်ဤဆိုးဝါးသောအမှားငါ့ကိုအကြောင်းကြားခဲ့သည်အလွန်ဝမ်းမြောက်မိပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ အရာအားလုံးအတွက်
ယခု The Confused ၏နောက်အဖွဲ့ဝင်အနည်းငယ်ကိုအလွယ်တကူ The Egregiously Ignorant ဟုခေါ်ဝေါ်နိုင်သည်။ သို့သော်ငါကလူတို့တွင်အကောင်းဆုံးကိုတွေ့မြင်ရန်ကြိုးစားသည်၊
ငါပြောစရာတစ်ခုကတော့မင်းဒီဆောင်းပါးကိုဖတ်ရင်ငါတို့ပူနေတာထက်နည်းနည်းလေးပိုပြောတာသင်စုဆောင်းမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်။ မင်းအသက် ၁၁ နှစ်မှာမင်းကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တာကိုဝမ်းနည်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်ကက်သရင်းနဲ့ကျွန်မတို့ဟာငါတို့ဘဝတစ်ခုလုံးကိုအနိုင်ကျင့်ခဲ့တယ်။
အနိုင်ကျင့်ခြင်းဟာသည်းမခံနိုင်သောကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်အထက်တန်းကျောင်းများကိုပြောင်းရွှေ့ရသည်မှာလျှို့ဝှက်ချက်မဟုတ်ပါ။ ငါကောလိပ်မှာရပ်တန့်လိမ့်မယ်လို့တွက်ဆပေမယ့်, ဒီအခြေအနေကသက်သေပြအဖြစ်, ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းမလုပ်ခဲ့ဘူး။
အခုငါအရမ်းစိတ်ရှုပ်နေပြီထင်တယ် Yik Yak ဆိုတာနာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ app တစ်ခုပါ။
သင် မှလွဲ၍ သင် မှလွဲ၍ အခြားသူတစ် ဦး ဦး ကိုပထမနှင့်နောက်ဆုံးအမည်ဖြင့်ခွဲခြားသတ်မှတ်နိုင်ခြင်းအတွက်သင်စိတ်ချမ်းသာခဲ့သည်။ သင်သည်သင်၏သူရဲဘောကြောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖော်ထုတ်အဖြစ်အဆင်ပြေမခံစားရဘူးသောကံဆိုး။
ထို့နောက် The Capricious ။ ငါ့ကိုစော်ကားလား ငါ့ကိုချီးမွမ်းလား ကျွန်ုပ်မသိပါ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စာဖတ်သူများသည်ဤလျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောထင်မြင်ချက်များကိုကျွန်ုပ်အားဖြေရှင်းရန်ကူညီနိုင်သည်။
မင်းရဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုလေးစားမှုကိုမြှင့်တင်ပေးဖို့ 'up မဲ' ရဖို့ 'မျိုချ' တဲ့ pun ကိုစဉ်းစားဖို့တစ်နေ့လုံးသင်အသုံးပြုခဲ့ပါသလား။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ငါကိုယ်တိုင်နဲ့ငါ့နှမွှေးထက်ပိုအရေးကြီးတဲ့အရာတွေရှိတယ်လို့ငါထင်တယ်။ အလေးအနက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိုကေ။ ယခုငါဤအပိုင်းအစမှချန်လှပ်သင့်ကြောင်း Egregiously Unoriginal မှတ်ချက်များပေါ်သို့, ဒါပေမယ့်ငါနေဆဲဤမှတ်ချက်များဘယ်လောက်ကွာဟမှုကို unoriginal ၏မှတ်ချက်ကိုယူနိုင်အောင်ရုံဖော်ပြရန်ကျိုးနပ်မယ့်ထင်ပါတယ်ပေါ်သို့။
ကျွန်တော့်ရဲ့တစ်ခုတည်းသောအကြံပြုချက်ကတော့မင်းကနောက်ပြောင်တာမျိုးမလုပ်မိဖို့ပါပဲ။ အစဉ်အဆက်လိုပဲ။ ဘယ်တော့မှမ
အခုတော့ levity ၏မျက်နှာကိုထောက်။ ငါနောက်ဆုံးတော့အဆိုပါ Defenders များအတွက်အချိန်ရဲ့ပြောချင်ပါတယ်။ သင်တို့တွင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်ကိုငါမသိသော်လည်းသင်တို့အားလုံးသည်အံ့သြဖွယ်ဖြစ်သည်။ ပြီးတော့လူကြိုက်များတဲ့ယုံကြည်ချက်နဲ့ဆန့်ကျင်ပြီးဒီအကြောင်းတွေကိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မရေးခဲ့ပါဘူး။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ် OP (မူရင်းပိုစတာ) ခင်ဗျား MVP ကိုလုပ်ပေးတာ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အမည်များကိုအတိအလင်းဖော်ပြခဲ့ပေမယ့်အနည်းဆုံး y'all အဲဒီမှာအချို့သောကောင်းတဲ့မှတ်ချက်များပစ်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ရိုးသားစွာကျေနပ်မှုမရ။ ဒါဟာရေတွက်အားထုတ်မှုပါပဲ
ဤကြင်နာသောစကားလုံးများ (သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်) အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။
အမည်ဝှက် app တစ်ခုမှနိမ့်ကျသည့်မှတ်ချက်များကိုရေးရန်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်လုံလောက်သောဂရုမစိုက်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ငါသည်ဤလျစ်လျူမေတ္တာရှင်တာပါ။ ငါကလူအများကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဂရုမစိုက်ခဲ့ပါဘူးဆန္ဒရှိ
ကျွန်ုပ်နှင့် ပတ်သက်၍ အနည်းဆုံးပို့စ် ၅၀ ရှိကြောင်းတစ်စုံတစ်ယောက်ကအသိအမှတ်ပြုသည်ကိုကျွန်ုပ် ၀ မ်းသာပါသည်။ လူအများစုကဤမှတ်စုတိုကိုဖမ်းမိခြင်းမရှိဟုထင်ရပြီး Yik Yak ကိုကျွန်ုပ်တို့နှင့် ပတ်သက်၍ ဆက်လက်ပြောပြခြင်းသည်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်ဟုထင်မြင်ခဲ့ကြသည်။
ဟုတ်ပါတယ်၊ ငါကဒီနေရာမှာသံလိုက်အိမ်မြှောင်ပါ။ ဒါကြောင့်မုန်းတီးမှုတွေကိုလျစ်လျူရှုဖို့ပြောတဲ့လူကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာအများကြီးကိုဆိုလိုသည်။
ဒါဟာကျွန်တော့်ကိုတကယ်ထိခိုက်စေခဲ့တဲ့အတွက်ဒါဟာကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ဆုံးကာကွယ်သူပါ။ ဒီလူကသူ့ကလေးဘဝအကြောင်းရေးခဲ့တဲ့အရာတွေကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တော့သူအရမ်းဝမ်းနည်းသွားတယ်။ သူသည်အလွန်ဆိုးရွားလှသည့်ဆိုးဝါးသောအရာတစ်ခုခုကိုဖြတ်ကျော်နိုင်ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်ကက်သ် (အရဆိုးရွားသည့်အရာမဟုတ်သော) အဖြစ်အပျက်ကိုအနှောင့်အယှက်ပေးသည်ဟုထင်နေဆဲဟူသောအချက်သည်ကျွန်ုပ်ကိုကမ္ဘာကြီးနှင့်အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်စေသည်။
မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာငါမသိဘူး၊ ဒါပေမယ့်မင်းငါဖြတ်သန်းခဲ့ရတာတွေကိုတောင်းပန်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့မင်းကမင်းဟာမယုံနိုင်လောက်အောင်ခွန်အားကြီးတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာမင်းကိုငါပြောနိုင်တယ်။ မင်းဘယ်သူလဲဆိုတာငါသိတယ်။ မင်းကိုငါဘယ်လောက်အထိငါလေးစားတယ်ဆိုတာလူတစ်ယောက်ကိုပြောပြနိုင်မယ်။
နောက်ဆုံး။ အဆိုပါ Chainsmokers Yik Yaks သို့။ အဲဒီမှာအနည်းငယ်ပေမယ့်သူတို့ကအရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ သွားပြန်ပြီ:
စိတ်ဝင်စားဖွယ်အရာကဒီမှာသွား။ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ညီမနှင့်မမိတ်ဆက်ပါနှင့်။ ငါသက်မဲ့အရာဝတ္ထုနဲ့ငါ့မျိုးဗီဇကိုယ်ပွားနှင့်အတူလုပ်ပါလိမ့်မယ်။
TI ကမာရီယာကယ်ရီရဲ့အကြောင်း၊ မင်းငါ့ကိုဘာကြောင့်ဒီလောက်စွဲလမ်းနေတာလဲဆိုရင်မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှုဖြစ်လိမ့်မယ်။
အိုးငါ၏ကစားသမား, သင်သည်အဘယ်သို့လွဲချော် Insta အခွင့်အလမ်းညာဘက် !! အိုးခဏ
ယခုငါဤအန္တရာယ်ရှိတဲ့ပို့စ်များကို (အများဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်) ကို levity နဲ့ဆက်ဆံတယ်ဆိုတာငါသိပြီ၊ ငါဒါကိုငါလုပ်ရမယ်ဆိုတာသတိပြုဖို့အရေးကြီးတယ်၊ ဒါဟာကက်သရင်းပါပဲ။
ဤဆောင်းပါး၏နိဂုံးတွင်ကျွန်ုပ်အမှန်တကယ်ပြောချင်သည်မှာဆိုက်ဘာအနိုင်ကျင့်ခြင်းသည်တကယ့်အကျိုးဆက်များဖြစ်သည်။ အမည်မသိ Yik Yakers အတွက်မဟုတ်ဘဲပြစ်မှုကျူးလွန်ခံရသူများအတွက်တကယ့်အကျိုးဆက်များနှင့်အမှန်တကယ်ဖြစ်သည်။
ကျွန်တော့်အစ်မကက်သရင်းရေးခဲ့သည့်အတိုင်း၊ ကျောင်းဝင်းတဝိုက်လမ်းလျှောက်ရတာဘာလဲဆိုတာမင်းသိသလား၊ အတန်းတက်ဖို့ကြိုးစားတာ၊ မင်းရဲ့တည်ရှိမှုကိုဘယ်သူမုန်းတာလဲမသိဘူးလား။ သင်၏မျက်နှာကိုရဲရဲရင့်ရင့်သည်ဟုမည်သူထင်သနည်း၊
ကျွန်ုပ်သည်အသက် ၂၀ ရှိကြောင်းမထူးဆန်းပါ။ စကားလုံးများသည်အလယ်တန်းကျောင်းနှင့်အထက်တန်းကျောင်းသားများကဲ့သို့ပင်ယခုပင်နာကြည်းကြရပါသည်။ စကားလုံးဘယ်လောက်များများကိုဖော်ပြတယ်ဆိုတာကိုဖော်ပြဖို့သင့်မှာသင်အမာရွတ်များသို့မဟုတ်ဆေးရုံအပြင်လူနာစာရွက်စာတမ်းများပြသရန်မလိုအပ်ပါ။ ကျွန်တော့်နောက်ဆက်တွဲငါးရက်ကြာပေါက်ကွဲခဲ့တာ၊ ခြေဆစ်နှစ်ခုလုံးကိုတစ်ပြိုင်တည်းကျိုးပဲ့ (အကြိမ်ပေါင်းများစွာ) ငါလက်နဲ့ခြေထောက်ကျိုးသွားတယ်၊ ငါ့စိတ်ထဲမှာသံသယဖြစ်စရာမရှိဘူး။ မြင်သာထင်သာမရှိသောအခြားသူများ၏စကားများမှသိသာထင်ရှားသည့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဒဏ်ရာများထက် ပို၍ အားအင်ချိနဲ့စေသည်။